I-P3.9 yangaphakathi ye-500 yeemitha zesikwere esikhokelwe kwiscreen iya kuba kwisitokhwe ukuphela kwale nyanga
Imfuno yodonga lwevidiyo olukhokelwe yi-P3.9 ludlula ukubonelelwa Kukho i-squre yeemitha ezingama-500 zepaneli ekhokelwayo kuthengisiwe kwezi ntsuku, ke sigqibe ekubeni sigcine ezinye iimitha ezingama-500 ze-videowall kwisitokhwe.
Kutheni le modyuli ekhokelwayo yayithandwa kangaka? Okubangela umdla kukuba isifundo sibonisa ukuba ngenxa yangaphakathi yokuqeshisa isikrini se-LED sikhula ngokukhawuleza okukhulu, i-P3.9 ingene kwimakethi yokurenta.
I-P3.9 indonga yevidiyo ye-LED yangaphakathi ngenkqubo yokutshixa ngokukhawuleza eyenza ubucwebe nokuba bungcono. Kuyilo lwe-elektroniki, imodyuli isebenzisa ireyithi yokuhlaziya ephezulu ye-IC kunye ne-Shadow yokuphelisa isekethe, ezi zinto zimbini zihambileyo ziya kuqinisekisa ukubonwa kwaye akukho layini yesiporho kwiscreen xa usibona ngokusondeleyo.
Kwaye iphakheji iphuculwe ukulungiselela iikhabhathi zomnyhadala wangaphakathi kwaye iindawo zokugcina izinto ziyonyuswa kubungakanani, asinakho ukwenza imveliso egqibeleleyo eyi-100%, nangona sisenza konke okusemandleni ukuze sanelise.